16/04/2018 - Page 3 sur 3 -
Hery Rajaonarimampianina : Ilaina ny fitoniana ho an’ ny fampandrosoana
16/04/2018 admintriatra 0
Ny vinan’ ny fisandratana no niompanan’ny tafan’ ireo mpianatra ao Mahajanga sy ny filoham-pirenena tao amin’ ny hotely Roche rouge, ny harivan’ ny 14 ny volana aprily 2018. Nampatsiahivin’ny Filoham-pirenena nandritra ny fihaonana ihany koa …Tohiny
Notanterahina tany vohipeno, omaly alahady 15 aprily, ny fanandratana olon-tsambatra an-dramose Botovasoa Lucien. Ho fanomezan-boninahitra izany fotoana izany, dia tonga nanotrona ny sorona masina lehibe ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery mivady, notronin’ireo mpikambana sasantsasany ao amin’ny …Tohiny
Nikatona ny ridaon’ny fiadiana ny « Coupe du Président » eo amin’ny taranja basikety, sokajy N1A lahy sy vavy, andiany fahefatra. Tontosa omaly, tetsy amin’ny lapan’ny Fantanjahantena Mahamasina mantsy ireo lalao famaranana. Tomefy ary tototra …Tohiny
Tena efa tsy avotra intsony mihitsy ve isika ity sa ahoana e? Toa lany andro manenjika mpitondra kanefa tsy mijery izay ataon’ny tena! Henatra tsy nisy toa izany ny an’ity fianakaviana iray mba nandefa fonosana …Tohiny
Nandray lesona avy amin’ny tantara sy ny lasany, fony izy nitondra ny firenena, i Marc Ravalomanana. Ankehitriny , resy lahatra ary vonona hampihatra ny foto-kevitra momba ny fampihavanam-pirenena sy ny fanorenana ifoton’ny repoblika. Miainga avy ...Tohiny